Ciidanka PSF Puntland oo howlgalo ka sameeyey buuraha calmadow ee Gobalka Sanaag ayaa sheegay inay dileen 15 ka tirsan Maleeshiyaadka ururka Alshabaab ee halkaas ku
Faahfaahin Warka Qaraxa Buuhoodle
Naftii halige isasoo miidaamyey ayaa isku qarxiyey baabuur ay saaraayeen masuuliyiin isugu jira siyaasiyiin, saraakiil ciidan iyo odayaal deegaanka ah. Waxaa loo malaynayaa in bartilmaameedku ahaa masuuliyiinta baabuurka saaraa oo kala ...
Toos Xafladda Dhagaxdhiga Garacad
DEG DEG:Sarkaal Ka Tirsanaa Ciidanka Puntland Oo Lagu Dilay Gaalkacyo
Sarkaal kamid ahaan jiray ciidanka birmadka puntland ayaa goor dhow lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Sarkaalkaan oo magaciisa lagu sheegay gebigabi ayaa salaadii cishe kadib lagu dilay masjid ku yaala xero daraawiishta. Kooxda ...
DEG DEG +Akhriso:Wararkii Ugu Danbeeyey Ee Jiidaha Dagaalka Sool Iyo Dhaawacyo Ka Dhashay Duqaymo Ka Dhacay
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq ee Gobalka Sool ayaa sheegaya in xiisad colaadeed ay ka taagan tahay jiidaha dagaalka. Wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan labo sarkaal ay dhaawacyo kala ...